CustomNC inogadzirisa iyo Notification Center interface | IPhone nhau
Minimalist vashandisi mune mhanza. Ivo vanhu vasingade mitsara, vaparadzanisi, uye zvimwe zvinoonekwa uye zvimiro zvinoonekwa muIOS Notification Center ikozvino vane mhinduro. Icho chitsva tweak yeJailbreak inonzi CustomNC iyo inobvumidza iwe kugadzirisa kutaridzika kweNotification Center kuti iite nenzira yatinoifarira.
Sezvinoratidzwa mumufananidzo uri pamusoro, unogona kubvisa zvachose "Nhasi" peji kubva kuNotification Center kana uchida. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kuviga iwo ma tabo, ayo akapatsanura uye kunyange kudzima iyo blur mhedzisiro iyo iyo kumashure inoratidzwa kana isu tasvika iyo Notification Center.
Zvese sarudzo zvekugadzirisa pazvinhu izvi tweakIvo vanogona kuwanikwa mune yeChisarudzo chikamu chekushandisa icho chakaiswa. Patinoita shanduko kunyorera, isu tichafanirwa kuita respring pane chishandiso, kuitira kuti vagone kushanda, saka iyo CustomNC yekuvandudza yaisanganisira inobatsira bhatani reizvi. Iri pazasi pemenu yekumisikidza.
Kunyangwe zvisina kunyatso kujeka kana vanhu vazhinji vachizoshandisa mukana wekubvisa iyo "Nhasi" peji, nekuti ndipo pane iyo Widgets Pamashandisirwo eApple, ichokwadi kuti vashandisi vazhinji vangade kuti iyo Notification Center haina kuoneka neayo ese mitsara uye vaparadzanisi vanokanganisa dhizaini yepaneru. Uye zvakare, mumwe haazive nezvekuti yakaipa sei iyo 'blur' mhedzisiro iri kumashure kweiyo Notification Center kudzamara iwe uchigona kuidzima uye kuiona sezvazviri nekuda kweizvi tweak. Izvi zvinoita kuti iratidzike yakachena zvakanyanya uye ichioneka inofadza.
CustomNC inogona kutorwa pasi kubva kuCydia, mune iyo BigBoss repository, pane zvishandiso zvine iyo Jailbreak. Iyo yekuvandudza inosimbisa kuti iyo tweak yeiyo Notification Center yakaedzwa chete pamidziyo ine iOS 9, saka hazvipe vimbiso yekuti inowirirana neshanduro dzekare dzeanoshanda system kana mabheji matsva eIOS 10 iri padhuze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » CustomNC inogadzirisa Notification Center interface
LIMBO, inowanikwa muApp Store ine chakakosha mutengo